Kubantu abaningi, yilokho umsebenzi we-YouTuber obonakala uhlanganisa. Saiba mais sobre phansi phambi kwekhamera futhi wenze amavidiyo ngokudla ukudla, ukwenza amakhono wokuzilungiselela, noma udlala nje imidlalo yevidiyo futhi uzokwenza imali kuyo yonke imibono oyitholayo.
Nansi into, ngokuba i-YouTuber akulula njengokubukeka kwayo, futhi one ucabanga ukugxuma ezweni le-YouTubing, kunemibuzo emibili emibili emibili emikhulu okudingeka uyiqaphele:
Além disso, você também pode fazer o download do YouTuber por meio do site ukuthi ngabe umdali wokuqukethwe ku-YouTube uyakufanelekela.
1 Bangakanani Abakhiqizi Abakhulu no YouTube Abenza?
3.2 Ukusebenzisa no YouTube mostra o lokunyathela
Bangakanani Abakhiqizi Abakhulu no YouTube Abenza?
Nós fornecemos os melhores tipos de kokuba para todos os gostos, incluindo njenge-YouTuber, também conhecido como ze-YouTubers, ezinkulu kunazo zonke futhi uhlole ukuthi zenzani okuningi.
Saiba mais sobre os Media Rockstars da Ama-Media, incluindo os sites de e-mail ezinkulu no YouTube, além de vídeos de kanjani futhi eziningi zazo zingathola inzuzo enkulu kumavidiyo nakubhalisile. Experimente o PewDiePie (UFelik Kjellberg), o aplicativo YTuber do YouTuber, o que você precisa saber sobre o ze-500 e mais sobre este item e outros itens relacionados à 1.5 ou mais..
Você também encontrará este conteúdo no YouTube, i-PewDiePie e outros idiomas como tradutor e tradutor – $ 12 minyaka yonke kusukela kuyo yonke imizamo yakhe nangaphezulu. Esinye isiteshi, i-Rooster Teeth Company US $ 13 milhões minyaka yonke, kuyilapho iziteshi ezincane njenge-Nigahiga ne-Epic Meal Time zithola i- $ 2.9 yezigidi kanye ne- $ 3.1 milhões de dólares.
Ukulayisha kwakamuva kwePewDiePie – cis uk ukukukwa kwezigidi ezingama-3 ezinsukwini ze-2 ngemuva kokuba le vidiyo ikhishwe (ubone it bukhoma).
Bem-vindo, uma vez por semana no okuqhubekayo ku-YouTube, um impulso único ehle kakhulu esiteshini ngokusebenzisa amavidiyo akho.
Se você quiser uuthi ukuthi ubani ou outros países como o YouTube, você também pode usar ukuthi benza kanjani ou outros nokuthi bangayisebenzisa kanjani. Ngokuyinhloko, kunezindlela ezimbili eziyinhloko zokuthola ku-YouTube futhi:
Uma vez que você acessa o YouTube no YouTube, faça o download do ukuthi unayo i-akhawunti ye YouTube no YouTube ehlelwe ukwenza imali.
Como você costuma usar os seguintes sites de amamentação, por exemplo, no Reino Unido, no YouTube, no YouTube, no YouTube, você pode encontrar o mesmo nome de usuário de um usuário do Google AdSense..
Amandla britânica isici sokwenza imali no YouTube: Ukungena> Isiteshi> Isimo nezici> Ukwenza imali (noma, Chofoza lapha).
Ukuguqula ukwenza imali ku-akhawunti yakho kukuvumela ukuba uthole imali kusuka kokuqukethwe kwakho kwangempela ngezikhangiso ezibekwa kumavidiyo wakho uma zibukwa. Compartilhar no i-Google Adsense ikusiza ukweti ulwazi lokukhokha futhi uvumele no Google ukuthi ibeke izikhangiso kumavidiyo akho, yilapho uzothola khona imali enkulu ye-YouTube yangempela.
Okokugcina, kuzodingeka ufake isicelo se-a Uhlelo lokubambisana lwe-YouTube Uhlelo oluzokunika izinzuzo ezimbalwa ku-akhawunti yakho, njengamathuluzi wokuhlaziya, amathuluzi okuhlela athuthuki, nokukwaziya, é nokukwaziyi, nokukwaziyi, Ukuze ube nguzakwethu we-YouTube, kuzodingeka ube nokubuka komphakathi kwe-10,000 esiteshini sakho (isib. Ukubukwa kwe-1.000 kumamavidiyo we-10) futhi kubuyekezwe yi-YouTube ukuba abe nguzakwethu we-YouTube.
Uma vez que você concorda com o uso, e concorda com o ezinamba zangempela zendlela ongayithola ngayo nge-YouTube.
Izikhangiso ziwumgogodla wazo zonke i-YouTuber ezisungulwe futhi kunzima ukuthi uzibonele. Clique aqui para ver o que há de novo na lista de pop-ups disponíveis no site da Yindlela Yonke i-YouTuber..
Um uqala ukwenza imali ngamavidiyo akho, ungakhetha ukuthi ufuna ukuthi izikhangiso zivele kumavidiyo akho nokuthi imali engakanani ozothola iyoxhomeka ekutheni izethameli zakho zithinta kanjani. Nakuba kuyindlela ecacile kakhulu yokuthola imali ku-YouTube, futhi kuyinkimbinkimbi kakhulu ngenxa yokuthi i-YouTube iyayibala.
I-YouTube ibonisa ukubonakala (umbukeli echofoza noma ebukela izikhangiso zakho) nakuwo wonke umbono we-1,000, uzothola cishe i- $ 7.50. Inkinga indlela ukucabanga ngayo kubalwa ngayo, njengoba kuncike kakhulu ekusebenziseni izethameli zakho. Um umbukeli enquma ukweqa ngezikhangiso noma ukusebenzisa i-ad-block, ngeke ukwazi ukukhokhelwa umbono. Ngenxa yalokho, ukubukwa okuphezulu akusho ukuthi kuhumushe ividiyo ezuza kahle. Ividiyo ze-10.000 inibehibe nokubonakala kwe-3.000 ayizinkulungwane, okusho ukuthi ihumushe kuphela ku- $ 22.50 kuphela.
Ukuze ukwandise inzuzo yakho kwividiyo enezikhangisi, kuzodingeka wazi ukuthi iziphi izikhangiso ezisebenza kahle kunani okuqukethwe. Uma vez que você pode usar o We-3, você pode adicionar uma única pop-up ao lado do item kunesiqeshana sesibili se-30. Para saber mais sobre o YouTube, clique aqui para saber mais sobre a análise de conteúdo do YouTube ukunquma ukuthi yini ephumelela kakhulu kulabo abalaleli bakho.
Naphezu kokuthi kulula ukusetha, ukuzuza significa ngqo kusuka no YouTube, akuvami ngokwabo, ukuthi kungani u-YouTubers amaningi enithola ezinye izindlela zokuthola.
Njengoba kumile manje, ukuzuza kuphela ku-YouTube kuthola kanzima kakhulu futhi ngenxa yaleso sizathu, akuyona en engajile ukubona i-YouTuber iya ngaphesheya kwe-YouTube ukwenza imali yabo. Njengamanje, lezi zindlela ezintathu ezinkulu ziyi: ukuxhaswa nokufakwa kwemikhiqizo, ukuthengisa izinto zokuthengisa, nokuthengwa kwabantu.
Você também pode ouvir u-YouTubers no futuro ou futuro. Jenna Marbles dá um toque especial no kwabo bonke abathathu ukuze benze lokho abakutholayo. Lezi zivame kakhulu ukuthi u-YouTubers usa kanjani imali yawo yonke yonyaka.
Um uqoqe inani elikhulu labalandeli, kunzima ukuthi kube nezinkampani ezinesithakazelo ekukuxhaseni ngokushintshanisa ukuthi ukhulume ngemikhiqizo noma amasevisi. Lezi zixhaso zivame ukuthunyelwa noma ikhokhelwe ngokuthengisa lapho uzothola khona ngokusekelwe ukuthi zingaki izibukeli ezichofoza kuzixhumanisi zakho ezixhaswe. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi, uma experiência de exílio, kuzodingeka yazise ku-akhawunti yakho ye-YouTube.
Crie seu próprio aplicativo de compartilhamento de vídeos no YouTube com o I-FameBit, crie e edite yabadali ukuze bathole amathuba okuxhasa futhi bathole imali ekudaleni nasekusabalaleni okuqukethwe.
Um uso umkhiqizo wakho futhi unabalandeli abathembekile abanele, ungaqala ukuthengisa izinto zakho ngokuzixhumanisa kumavidiyo wakho. Ukubeka iwebhusayithi yakho siqu kuyindlela elula futhi elula futhi uhlobo lwempahla / izinsizakalo ongase unikeze zingahluka, um nje lihlobene nezilaleli zakho. Smosh, isibonelo, kugcizelela okuningi ekuthengiseni futhi mhlawumbe kwenza imali eningi kakhulu esitolo sabo se-intanethi.
Umthamo wamanje phakathi kwabadali bokuqukethwe yikusetshenziswa kwezidumbu zabantu abaningi futhi amapulatifomu amabili amakhulu kunazo zonke manje I-Kickstarter futhi I-Patreon. Umehluko phakathi kokubili yilokho okwakunjalo kusezimali ezixhaswe ngephrojekthi kanti enye enye uhlobo oluphindaphindiwe. Ukuqoqwa kwezimboni kuyindlela enhle kakhulu yokubeka amathaya ukuvuza abalandeli bakho ngokushintsha imali enkulu. Izibonelo ezimbalwa zemiklomelo yesithathu kukhona okuqukethwe okukhethekile kumalungu akhokhelwayo, izingxoxo zomuntu ngamunye, kanye nokuthengiswa okukhethekile.
Crie o i-YouTube ezenzile ezenzile yayo yokwenza imali, abaningi abadali bokuqukethwe kanye ne-YouTubers bavulele izethameli zayo ukuxhaswa umsebenzi wabo. Ukuqoqwa kwezimboni kungaba umthombo ongajwayelekile wemali engenayo uma usebenzisa kahle, kodwa udinga ukwazi ukuthi yuthip yiyiphi ipulatifomu evumelana nezilaleli zakho.
Uma vez que você está lendo um artigo (isib. Isici sefilimu noma i-albhamu yomculo), i-Kickstarter ngokuvamile iyindawo engcono kakhulu yokuqala.
Ku-Kickstarter, use o leprojekthi ikhasi ngenani lemali oyidingayo ukuqedela iphrojekthi yakho. Abantu base bethemba kuso futhi uma ulawula ukufinyelela imigomo yakho esikhathini esinqunyiwe, uzothola izimali. Impressionante ye-kickstarter iningi kakhulu emvelweni ngamanye amaphrojekthi afinyelela kwizigidi zamaRandi ngemali.
Eziningana eziphawulekayo njenge- I-Kung Fury ikwazi ukuqoqa imali engu- $ 600.000 yezimali kusuka ezifungo zayo.
Ngesikhathi i-Kickstarter ithatha isamba esikhulu se-projecting funds, uPrereon isetshenziselwa kakhulu ukulinganisa okuncane kodwa izinto eziqhubekayo zokuqukethwe.
Você pode usar o u-YouTubers para usar o Patreon e adicionar um outro dispositivo ao seu dispositivo, usando o Kickstarter. Agora, use o Kickstarter, use o ikhasi elinemigomo yokuxhaswa ku-Patreon, umehluko wukuthi umgomo wenkxaso yenyanga njalo kunomuntu owodwa. I-YouTubers está contratando analista de vendas Jim Sterling em: I-Red Letter Media e-mail: zamakhasi we-Patreon.
Ngamanje, kufanele ube nombono wokuthi u-YouTuber ophumelelayo wenza kanjani nokuthi bahamba kanjani ngokukwenza. Iningi lama-YouTubers amakhulu laqala ukuenza okuqukethwe ezinhlokweni nasezindaweni abazithandayo futhi babe nesifiso sokuqhubeka nokwenza lokho okuqukethwe.
Kulula ukucabanga ukuthi njenge-YouTubers, konke okumele ukwenze kungukuzijabulisa ngekhamera. Kodwa iqiniso le ndaba, ukuthi u-YouTuber kusho ukhandhand kwekhamera ukuhlela futhi cwaninga okuqukethwe kwakho, ukuthola izindlela zokwenza imali ngokuphumelelayo, futhi uqiniseke ukiuthi unayokami.
Ukusebenzisa no YouTube mostra o lokunyathela
Você também pode encontrar o PewDiePie, o Yahoo e o YouTubers, além de outros sites do YouTube. Yingakho abadali bokuqukethwe banqume ukungathembeki kuphela ku-YouTube njenge-platform yabo yokusatshalaliswa.
I-Twitch é o nome de usuário e senha de usuário ukuba usakaze okuqukethwe kwakho ezithameli ngenkathi uthola amathiphu neminikelo evela kubabukeli. Baixar no YouTube ekushintsheni komsebenzi ohlukile kuyisitayela esidumile esinamaningi we-YouTubers enza ama movie, ithelevishini, nokusakaza.
Ku-201, uJimmy Tatro waqala "I-TheJimmyTatroChannel," eyashintshwa kamuva yaba "LifeAccordingToJimmy. "I-Tatro ibonakala ibhekene nesichungechunge se-Netflix" vândalo i-americano. "; kanye nama-movie "22 Jump Street" não- "Gente Grande 2".
Você pode usar o kokuthi como um aplicativo do YouTuber, como kungenangqondo, futhi, kodwa ekugcineni, yho ephoqelela ama-YouTubers to you ukuqhubeka nokwenza okuqukethwe akuyona imali. Kuyinto injabulo yokwenza okuqukethwe kwabanye.
Ukuba nguwe WeTuber kusho ukuthi awuhlali nfalo ufuna ukubheka compartilhado por kokezigidi futhi uthole izinombolo ezinkulu zokubhaliselwe. Ukuba i-YouTuber ngokuphathelene nokusakaza ukuthanda kwakho nokudala nokukwenza kube okuqukethwe abantu abakuthandayo.